The ọhụrụ àjà Lightning Box Games nwekwara obụrede mbụre nke oké visual nghọta na onye na-abịa na-akpakọrịta na mmepe. Eso ndị fun-n'anya ibu panda na a Kung Fu njem ichọ oké Enwee Mmeri. Nke a Ohere mepere Best Daashi game dị ukwuu anya na na atụmatụ mgbe nile Enwee Mmeri niile site na egwuregwu.
Banyere Developers nke panda Pow
Àmụmà Box Games e kpọbata egwuregwu na egwu egwuregwu ụlọ ọrụ ruo ihe karịrị afọ iri. The ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ndị na-eduga suppliers ma ala dabeere na online casinos. Ha egwuregwu na-enye ọtụtụ nke ekwekọghị na bonuses na egwuregwu na-enwe. Panda Pow bụkwa otu n'ime Ohere mepere Best Daashi game awa site ha.
The egwuregwu nke bụ a Ohere mepere Best Daashi egwuregwu atụmatụ ise-esi anwụde na atọ e nyere ahịrị na 25 ofu paylines. The-esi anwụde na-enịm ke n'ihu a ndabere na kpamkpam na-acha uhie uhie na agba na-kpuchie na Chinese imezi ụlọ nsọ, na osise. Isiokwu na eserese nke a oghere na-tụnyere ndị Kung Fu panda trilogy. The ndịna na-ọma n'ihe na-agụnye ihe animated panda onye bụ a mara artist. Ị ga-ahụkwa kechioma ego, azu ozuzu na ndị ọzọ na Chinese-themed akara tinyere ole na ole ọkọlọtọ kaadị akara na-esi anwụde.
The ndị ọzọ na atụmatụ nke a Ohere mepere Best Daashi game agụnye:
Red panda wilds- The red bonus panda bụ ọhịa na ga-eji dochie ndị ọzọ nile akara ugbu na ihuenyo ewepu na gold panda. Nke a na akara ngosi ga-adaa naanị na atọ n'etiti esi anwụde.
Gold panda wilds- Nke a na akara ga-iputa n'oge free egwuregwu naanị na ga ịnọchi ihe ndị ọzọ nile na akara ewepu uhie bonus panda akara. Nke a na akara ngosi ga-iputa na niile na-esi anwụde ma ọ bụghị na ukwu 1 n'oge free egwuregwu naanị.
Free Games- Ọdịda ise ma ọ bụ karịa red panda wilds n'ebe ọ bụla na-ele ga rụọ ọrụ free egwuregwu. Ị ga-enweta stacked wilds n'oge a gburugburu. Ha na-atụkwasịkwara niile na-esi anwụde ma e wezụga ukwu 1 ka i ibu Enwee Mmeri. Nke a na atụmatụ nwekwara ike na-re- ọrụ site ọdịda ise ma ọ bụ karịa stacked wilds.
Jackpot Total £187397.13
Jackpot Total £87813.31
Jackpot Total £45845.38
Jackpot Total £15150.12
Jackpot Total £14716.49
Jackpot Total £9877.59
Jackpot Total £7808.98